Nandeha fiara teny Ambohibe Ilafy ilay Karana androany tokony tamin'ny folo ora latsaka fahefany tany ho any, no nisy sakanana vato ny lalana nandehanan'ny fiara nitondra azy. Vao nijanona izy dia nisy olona tonga nitondra moto nanambana basy, dia ny fiaran'ilay Karana ihany no nitondran’ireo olon-dratsy azy.
Najanon’ireo mpaka an-keriny tamin'ny lalana Ambatobe Panoramique miazo an'Ambohimangakely ny fiara Ford Escape, miloko manga antitra, fiaran’ilay Karana vao niala kelikely ny toerana nisakanan’izy ireo azy. Fiara hafa no nitondra azy avy eo. Mandeha ny fikarohana amin’izao fotoana izao.
Efa misy Brigady manokana natao hiady amin’ny mpanao fakana an-keriny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena amin’izao fotoana izao. Araka ny loharanom-baovao dia tara ny fampandrenesana mpitandro ny filaminana fa natahotra ny fianakaviana.